I-China Insimbi Engagqwali Izibopho Ziyisesekeli Esidingekile Sokuzulazula Okuphephile Kwemikhumbi Ekhiqizwayo naseFektri UDaren
Izibopho Zensimbi Engagqwali Ziyizesekeli Ezisemqoka Zokuzulazula Okuphephile Kwemikhumbi
Kumkhumbi ohamba ngomkhumbi, konke kuhlu olugcwele lwezesekeli, kulula kakhulu ukuzulazula okuphephile. Izesekeli eziningi zomkhumbi, kufaka phakathi insimbi engagqwali yekhebula lentambo yasolwandle, noma ngabe izesekeli ezincane, ezincane, ukuphepha komkhumbi izingxenye ezibalulekile ohambweni. Kungani ukusho ukubaluleka kwalezi zingxenye ezibonakala zincane ukuthumela? Asikhulume:
Njengoba kwaziwa yibo bonke, ezindaweni ezisogwini olusempumalanga eChina, amachweba amaningi, ngokuthuthukiswa kokuhwebelana kwamazwe omhlaba, izinga lokusetshenziswa komkhumbi liphezulu kakhulu, okwenza isilinganiso sokusetshenziswa kwensimbi yensimbi engagqwali inyuke kakhulu, bangasho ukuthi umkhumbi ngaphandle . Ngokusebenzisa intambo yensimbi engagqwali yasemanzini, ungavumela umkhumbi ukuba uphephe kakhulu, ngoba lezi zingxenye ezincane zingasetshenziswa ukubopha, ukuqinisa, ukulungisa.
Ohambweni, isisindo somkhumbi uqobo sinzima kakhulu, besinyakaza ngenxa yesimo sezulu esingesihle. Uma ngalesi sikhathi kungekho thayi yensimbi engenantambo yasolwandle engathumela izingxenye endaweni yokuqala, ziholele ekutheni izingxenye zomkhumbi zikhululeke noma zishaywe ekugijimeni, lokhu kuzonikeza ukuhamba ngomkhumbi kuyingozi, kepha uma kukhona intambo yensimbi engagqwali yasemanzini, khona-ke yenza izesekeli ezifanele, ezivela emoyeni nasemvuleni, vumela ukuhamba kahle komkhumbi.
Emakethe iningi lezintambo zekhebula laseMarine ngensimbi engagqwali 304 l insimbi engagqwali, 316 l insimbi engagqwali nezinye izinsimbi ezimbili ezingenalutho zekhabhoni. Kungani usebenzisa impahla engagqwali? Noma insimbi engagqwali ye-carbon austenitic?
Sonke siyazi ukuthi insimbi engagqwali inokulwa nokuguga, ukumelana nokugqwala, ukumelana namazinga okushisa aphansi, akulula ukugqwala, nokunye okunjalo, nokulingana okungu-304 l insimbi kanye no-316 l insimbi engagqwali kungaletha ukumelana nokugqwala kwemvelo yasolwandle i-chlorine ephakathi ion (medium), futhi kulula ukucubungula ukubumba, ngeke kube khona ukugqwala kwe-intercrystalline ngemuva kokushisela kuletha inkathazo efihliwe. Ngakho-ke sikhethe insimbi engagqwali engu-304 l no-316 l insimbi engagqwali yentambo yasolwandle ifaneleke kakhulu
Izinzuzo eziningi zibekwe ku-Marine insimbi engagqwali, kanye nokubopha okunamandla, amandla ahlanganisayo, ngakho-ke hhayi kuphela ubukhulu bokusetshenziswa kwayo emkhunjini, kungasetshenziswa nakuphethiloli, epulatifomu kawoyela, ekwakheni, ezokuthutha, amapayipi, ukushisa ukulondolozwa, ucingo nentambo, ikhebula ibhuloho, imishini yokuxhumana, izimpawu, ezolimo, ezokuthutha, ukukhiqizwa kwemishini, amandla kagesi, izinto zikagesi, ukukhiqizwa kwezimboni, imishini yezokwelapha, isitshalo samandla, izitshalo zobisi, imboni yamakhemikhali, izindiza, ujantshi, ujantshi wesivinini esikhulu , esitimeleni, imboni yezimoto neminye imikhakha.